अनसन स्थगित गर्न डा. केसीलाई मानव अधिकारकर्मीहरूको आग्रह – इन्सेक
काठमाडौँ ०७३ असोज २० गते
मानव अधिकारकर्मीहरूले चिकित्सा क्षेत्र सुधार, अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका मागसहित असोज १० गतेदेखि आमरण अनसन बसेका त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई केही दिनका लागि अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अनसनरत डा. केसीसँगको असोज १९ गते गरिएको भेटमा मानव अधिकारकर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाई, बाबुराम गिरी, ओमप्रकाश अर्याल, इन्द्र अर्याललगायतले अनसनका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको र चाडको अवधिमा डा. केसीले उठाएको मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण कम हुनसक्ने भन्दै तत्कालका लागि अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरिएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
भेटमा मानव अधिकारर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले चिकित्सा क्षेत्रभित्रको विकृतिलाई डा. केसीले नेपाली जनतामाझ उजागर गरिदिएको बताए । उनले अनसनरत केसीले उठाएका मुद्दा निरन्तर स्थापित हुँदै आएको र राज्यले पनि उक्त मुद्दाहरूलाई सजिलै पाखा लगाउन नसक्ने बताए । अधिकारर्मी प्याकुरेलले केही सांसदहरूले डा. केसीको मुद्दालाई सकरात्मक लिएपनि नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको विकृत संस्कृति र संरचनाका कारण डा.केसीको मुद्दा स्थापित हुन नसकिरहेको बताए । यस्तो परिस्थितिमा सङ्घर्षको प्रकृति परिर्वतन गनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै अधिकारकर्मी प्याकुरेलले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएमात्र जनताले राहत पाउने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले डा. केसीले उठाएका मुद्दा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने र मुलुकलाई भविष्यमा सकरात्मक दिशातर्फ डोहोर्याउने काम गरेको बताए । अधिकारकर्मी प्रसाईले चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्षमता डा. केसीमा रहेको भन्दै समय, परिस्थिति र स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै तत्काल अनसन स्थगन गरी आफ्नो अमुल्य जीवन बचाउन डा. केसीसँग आग्रह गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी बाबुराम गिरीले पनि डा. केसीको जीवन नेपाली जनताका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अनसन स्थगन गर्नका लागि डा. केसीलाई आग्रह गरेका छन् । गिरीले मानवतावादीको सङ्घर्ष दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि हुने भन्दै तत्काल अनसन स्थगन गरी आफ्ना समर्थकलाई उल्लासका साथ चाडपर्व मनाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
विभिन्न माग राखि प्रा.डा. केसी असोज १० गतेदेखि नवौँ पटक आमरण अनसनमा बसेका हुन् । अनसनका कारण डा. केसीलाई छाती दुख्ने, टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने जस्ता समस्या देखा परेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक प्रा.डा. दिव्या सिंह साहले बताइन् ।